Manampy Antsika Hizaka Olana: Fahoriana sy Aretina Mitaiza
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuuk Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marshall Masedonianina Mazateky (Huautla) Mbunda Mizo Mongol Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nzema Népali Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Misy olana tsy azo sorohina na vahana aloha izao. Mety tsy ho afa-manoatra, ohatra, ianao raha manana aretina mitaiza na misy havanao maty. Afaka manampy anao hizaka an’izany ve ny Baiboly?
Hoy i Landy: “Taizan’aretina aho dia manaintaina be foana. Mihaosa be aho!” Tsy nahavita nifantoka izy indraindray rehefa nianatra Baiboly na nanao zavatra ara-panahy hafa, ka izay no anisan’ny tena nampanahy azy. Nanampy be azy anefa ny Matio 19:26 hoe: “Hain’Andriamanitra ny zava-drehetra.” Nahita fomba hafa ianarana i Landy. Nanomboka nihaino Baiboly sy gazety ara-baiboly noraisim-peo izy. * Nanaintaina be mantsy izy indraindray, ka tsy afaka namaky teny. Hoy izy: “Tsy afaka nifandray akaiky tamin’Andriamanitra aho raha tsy nisy an’ireo.”
Malahelo i Landy indraindray, satria tsy mahavita zavatra firy intsony. Mampahery azy anefa ny 2 Korintianina 8:12 hoe: “Raha misy aloha ny fahavononana hanome, dia ankasitrahana indrindra izany raha araka izay ananan’ilay olona, fa tsy araka izay tsy ananany.” Nanampy an’i Landy hitadidy izany fa faly amin’izay vitany Andriamanitra, satria efa manao izay fara heriny izy na dia tsy salama aza.
Hoy ihany i Vero: “Nalahelo be aho rehefa maty ilay zanako vavy 18 taona, ka hoatran’ny tsy ho vitako intsony ny hiaina. Nitsimbadika tanteraka ny fiainako.” Nampahery azy anefa ny Salamo 94:19 hoe: “Rehefa nihabetsaka ny tebiteby tato anatiko, dia ny [fampiononan’Andriamanitra] no nanafosafo ahy.” Hoy i Vero: “Nivavaka tamin’i Jehovah aho mba hanampy ahy hahita zavatra hatao, amin’izay mba ho tonitony ny alaheloko.”
Nifofotra nanao asa an-tsitrapo izy. Nampitahainy tamin’ny lakre ny tenany. Na torotoro aza ny lakre, dia mbola azo ampiasaina ihany. Toy izany koa fa na torotoro fo aza izy, dia mbola afaka manampy ny hafa ihany. Hoy izy: “Toy ny mampionona sy manafosafo ahy i Jehovah, rehefa mampianatra olona ny toro lalana sy ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly aho mba hampaherezana azy ireo.” Nataony lisitra ireo olona resahin’ny Baiboly hoe nandia fahoriana mangidy. Hitany fa “tia nivavaka daholo izy rehetra.” Tsapany koa fa “ilaina ny mamaky Baiboly raha te hizaka fahoriana.”
Rehefa nianatra Baiboly i Vero, dia tsy ny lasa intsony no nifantohany fa ny hoavy. Mampahery azy ilay fampanantenana ao amin’ny Asan’ny Apostoly 24:15 hoe: “Hisy fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina.” Tena matoky ve izy fa hanangana an’ilay zanany vavy i Jehovah? Hoy izy: “Mbola hahita an-janako aho, amin’ny fotoana voatondron’ilay Raiko [any an-danitra]. Hoatran’ny efa hitako sahady izahay mianaka mipetrapetraka ao an-jaridainanay. Mazava tsara ao an-tsaiko izany, toy ilay nahitako azy voalohany tamin’izy vao teraka.”
^ feh. 4 Misy an’ireo ao amin’ny tranonkala jw.org/mg.
Afaka mampahery anao ny Baiboly na dia ao anatin’ny fahoriana faran’izay mafy aza
AHOANA NO ANAMPIAN’ANDRIAMANITRA ANTSIKA?
Mazava ny valiny omen’ny Baiboly. Hoy ny Salamo 145:18, 19: “Akaikin’izay rehetra miantso azy i Jehovah, dia izay rehetra miantso azy araka ny fahamarinana. Hotanterahiny ny fanirian’izay matahotra azy. Hohenoiny izy ireo rehefa miantso vonjy, ka hovonjeny.” Tsy hitanao hoe mampahery ve izany? Ahoana anefa no hamalian’Andriamanitra ny vavaky ny olona tso-po mitady ny tari-dalany?
OMENY HERY ISIKA:
Mety handreraka sy hahakivy ary hampihena ny finoantsika ny olana. (Ohabolana 24:10) ‘Omen’i Jehovah hery [anefa] ny reraka, ary ataony matanjaka be ny tsy manan-kery.’ (Isaia 40:29) Hoy ny apostoly Paoly, izay niaritra fitsapana mafy: “Manana ny hery hiatrehana ny toe-javatra rehetra aho, amin’ny alalan’ilay manome hery ahy.” (Filipianina 4:13) Nanome hery an’i Paoly ny fanahy masina. Afaka mangataka azy io amin’Andriamanitra koa ianao.—Lioka 11:13.
OMENY FAHENDRENA ISIKA:
Te hahazo sy hampihatra ny torohevitry ny Baiboly ve ianao? Hoy i Jakoba, mpianatr’i Jesosy: “Raha misy aminareo tsy ampy fahendrena, aoka izy tsy hitsahatra hangataka izany amin’Andriamanitra, fa malala-tanana amin’ny rehetra izy sady tsy manome tsiny. Dia homena azy izany.” (Jakoba 1:5) Manao zavatra mifanaraka amin’ny vavakao ianao, raha mamaky Baiboly sy mampihatra an’izay voalaza ao. (Jakoba 1:23-25) Ianao mihitsy amin’izay no hahatsapa fa feno fahendrena ny toroheviny.
OMENY FIADANANA ISIKA:
Afaka manampy anao ho tony i Jehovah na manahy be aza ianao. Hoy ny Filipianina 4:6, 7: “Aza manahy na amin’inona na amin’inona, fa amin’ny zava-drehetra, dia ampahafantaro an’Andriamanitra ny fangatahanareo, amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fitalahoana mbamin’ny fisaorana. Ary ny fiadanan’Andriamanitra izay lehibe lavitra noho ny eritreritra rehetra no hiambina ny fonareo sy ny sainareo amin’ny alalan’i Kristy Jesosy.” Maninona raha mangataka fiadanana amin’i Jehovah?
Ahoana anefa raha tsy voavaha vetivety ny olana mahazo anao? Aza mieritreritra hoe nahafoy anao Andriamanitra. Afaka manome anao herim-po sy hery hiaretana izy. (1 Korintianina 10:13) Milaza koa ny Baiboly fa ho voavaha tanteraka ny olana mahazo antsika amin’ny hoavy!